Liistada ugu fudud ee Pokémon lagu horumarin karo | Wararka IPhone
Ku-guuleysiga Pokémon-ka mahadnaq nacnac gaar ah ayaa ah habka ugu dhakhsaha badan ee lagu helo khibrad. Sababtaas awgeed, waxaan ka soo xiganeynaa iPhone News waxaan kugula talinaynaa taxane ah Pokémon oo si fudud loo kobcin karo, iyadoo cawaaqibka ka dhalan doona kororka waayo-aragnimada ay tani leedahay. Waxaan mari doonnaa liiska Pokémon ee u baahan nacnaca ugu yar ee shaqooyinkan, talooyinka ugu badan iyo qaar si loo sameeyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. In Actualidad iPhone waxaan kusii wadeynaa talobixinta Pokémon Go, maxaa yeelay waa barnaamijkii ugu badnaa ee lagala soo degsado aaladaha iOS ee hadda jira, macluumaadka ku jira websaydhkeenana lama waayi karin
1 Kuwa u baahan nacnaca ugu yar si ay isu beddelaan
2 Immisa CP ayuu kor u kacaa markii la samaynayo Pokémon?
Kuwa u baahan nacnaca ugu yar si ay isu beddelaan
Pokémon ay u baahan yihiin Caramelos 12 (uguyaraan)
Pokémon ay u baahan yihiin Caramelos 25 (heer dhexdhexaad ah)
Inta kale ee Pokémon waxay u baahan doontaa 50 nacnac si ay u kobciso, si kastaba ha noqotee, qaar baa aad u badan, sidaa darteed isbadal ku sameynta waxay noqon doontaa isku mid ama si fudud. Ka taxaddar, maxaa yeelay kuwa kale ayaa jecel Dratini ama Gastly wax yar ayey umuuqdaan, markaa iyaga oo isbedelaya ma noqon doono sida ugu fudud ee aad filan karto. Si aad u kobciso waad ogtahay, waxaan tagnaa liistadeena Pokémon, waxaan dooranay mid, iyo halka ay tirakoobyadeeda iyo CP ka soo baxayaan, kala badh inta udhaxeysa "hagaajinta" iyo weerarada, waxaan helnay ikhtiyaarka "isbeddelaya" iyo tirada nacnaca lagama maarmaanka u ah .
Immisa CP ayuu kor u kacaa markii la samaynayo Pokémon?
Caadiyan Kumbiyuutarrada kumbuyuutarrada ka dambeeya isbeddellada ayaa laba jibaari doonaSi kastaba ha noqotee, waa waxoogaa nasiib ah, laakiin ugu yaraan waxay u dhaxeysaa 75% wadarta ilaa 125% wadarta, marka ha ka baqin. Talada ayaa ah in kasta oo aad haysatid nacnac badan, sug waxoogaa ah si aad u qabato Pokémon oo ku jirta heer wanaagsan, taas oo hubin doonta CP ugu badnaan ka dib horumarka. Weerarada qaaska ah ayaa sidoo kale fure u noqon doona la dagaalanka goobaha jimicsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Liistada ugu fudud ee Pokémon lagu horumarin karo Pokémon Go
Iyo magikarp isticmaala 400 macmacaan ??
Ku jawaab xradeon
Magikarp wuxuu ubaahanyahay 400 nacnac kuwa kale ayaa jira sida qabrigu wuxuu ubaahanyahay 100
Qalab noocee ah ayaa ku xiran aqoonsigayga Apple?
Apple waxay kireysay 4000 oo mitir murabac ah gudaha Hindiya si loo dardargeliyo habka naqshadeynta barnaamijka